emva kohlaziyo, iimephu zikaGoogle azisayi kukunika eyona ndlela ikhawulezayo ngokungagqibekanga
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Emva kohlaziyo, iimephu zikaGoogle azisayi kukunika eyona ndlela ikhawulezayo ngokungagqibekanga
Emva kohlaziyo, iimephu zikaGoogle azisayi kukunika eyona ndlela ikhawulezayo ngokungagqibekanga
Ngokwe-autoevolution , UGoogle wenza utshintsho kwi-algorithm esetyenzisiweyo ukunceda ukuhambisa abaqhubi ukusuka kwindawo 'A' ukuya kwinqanaba 'B' ngexesha elikhawulezayo. Ngexesha elithile kulo nyaka, uphando iya kutyhala uhlaziyo lweeMaphu ezingasazukubonisa abasebenzisi ngokungagqibekanga eyona ndlela ikhawulezayo phakathi kwamanqaku amabini, kodwa endaweni yoko iya kubonisa eyona ndlela ifanelekileyo yokusebenzisa ipetroli ukuya kwinqanaba 'B' ukusuka kwindawo 'A.' I-algorithm entsha iya kuthathela ingqalelo ukusetyenziswa kwepetroli kwaye ijolise kwindlela esetyenziswa ngayo irhasi endaweni yokuba kusetyenziswa ixesha elingakanani ngexesha lokuphuma kweemoto.
Ukuba ufuna ukufika kwindawo oya kuyo ASAP, uya kuba nakho ukuthi & apos; esihogweni ngokuthintela ukukhutshwa kwekhabhoni 'kwaye ubuyele umva kwi-algorithm endala eya kubala eyona ndlela iyiyo ngexesha. Nangona kunjalo, ngokungagqibekanga, eyona ndlela yonga amafutha iya kuboniswa kuqala kubasebenzisi beMaphu zikaGoogle emva kohlaziyo olufanelekileyo.
Uhlaziyo lweMaphu zikaGoogle kwezinye iidolophu kubandakanya idatha ephuculweyo yokuhamba koluntu kuGoogle uyasebenza ekuphuculeni indlela ezothutho lukawonkewonke ekuphatheni ngayo kwiapp. Kunye nolwazi oludlulileyo oluya kuboniswa ziMephu zikaGoogle ngeebhasi, oololiwe nakwindlela engaphantsi, uhlaziyo olwenziwe kwi-QT kwezinye iingingqi lukhokelele ekusasazeni ulwazi oluthe kratya lwendlela. Eyona nto iphambili kukuba abo bathatha izinto zokuhamba baya kukwazi ukubona ulwazi ngamanyathelo ngamanqanaba kunye noqikelelo lwexesha lokunceda abasebenzisi beMephu ixesha elichanekileyo lokufika (ETA).
Kutshanje, uhlaziyo lwezothutho loluntu lweMaphu zikaGoogle zatyhalelwa ngaphandle eLyon naseLille, eFrance. UGoogle usebenza neearhente zothutho lukawonkewonke kwimimandla eyahlukeneyo ukubonelela ngedatha yokuhamba yoluntu esele ikhankanyiwe. Uninzi lwezixeko ezikhulu kwihlabathi liphela sele zisebenzile kuGoogle kolu luhlobo oluvumela abo bangenayo imoto ukuba baxhamle kwiimephu zikaGoogle.
Umahluko phakathi kokubeka kunye nokudibanisa
yintoni eza ne-s8
Gcina i-200 yeedola kwiqhekeza leSurface Pro 6 kwiCostco
Uyifumana njani i-Moto X kunye neapos; s flashlight-activated flashlight kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android
Ukutshintsha i-Galaxy Qaphela iyunithi ye-7 ibamba umlilo kwi-Burger King, ukuqhuma kubanjwe kwividiyo
Ungalongeza njani iqela le-emojis entsha kwi-WhatsApp ye-Android
Ezona meko zilungileyo kumda we-Samsung Galaxy S6
Imidlalo ephezulu ye-simulator ye-10 ye-Android
I-PSA: Ixesha lokonga emini liqala ngentsimbi yesi-2 kusasa ngeCawe; ifowuni yakho kufuneka ilungelelanise ngokufanelekileyo